Ukucoca iifoto zokwenyani ze-OnePlus 6T | I-Androidsis
El OnePlus 6T Sesinye sezixhobo zokusebenza ekulindeleke ukuba zisebenze kulo nyaka. Iimpawu kunye neenkcukacha zobugcisa, kunye nokuyilwa kwayo, zilindile. Nangona kunjalo, kuninzi esele kwaziwa malunga nokubalulwa okunokwenzeka kunye nokubonakala koku Uluhlu oluphezulu siza Kubane.
Mva nje i-smartphone ibonakalisiwe zezinye iifoto zokwenyani eziye zavuza kwi-intanethi. Ngokuka ezi zinto, uyilo lweenotshi lwe "Waterdrop", olubonakalise kakhulu kwizixhobo zeOppo zamanje, ezinje R17, umzekelo, ukhona ekugqibeleni kwayo.
Le mifanekiso iye yaziswa liqela le I-SlashLeaks (/ ukuvuza). Ngelishwa, icala elingasemva leselula alifotwanga, ke uyilo olufanayo lusalindile. Ngaphandle koko, kulindeleke ukuba ifane ngokufanayo kwi-OnePlus 6, ngaphandle kwesifundi seminwe esingazukuyiphatha, njengoko ibizakufakwa phantsi kwescreen, njengoko iifoto zikwabonisa. Ukongeza, kunokubonwa ukuba isikrini se-smartphone sibanjwe zi-bezels ezincinci kumacala onke.
Ezinye iingxelo zangaphambili kunye namahemuhemu ziphakamise ukuba isikrini se-OnePlus 6T yipaneli ye-AMOLED ende engama-6.4-intshi enesisombululo se-FullHD + se-2.340 x 1.080 pixels (19: 9), ehlala kwindawo engaphambili eyi-91.5%. Kananjalo iya kufika kwimarike nge-octa-core Snapdragon 845 Inkqubo-kwi-Chip, i-8 GB ye-RAM, i-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi kunye nomthamo weebhetri we-3.500 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Ngaphandle koko, iya kuxhotyiswa ngekhamera esemva kabini ye-16 kunye ne-5MP, kodwa iya kusilela kwisinxibelelanisi somsindo seJack esisi-3.5mm.
Ekugqibeleni, umhla wokukhutshwa kwawo awaziwa. Ngaphandle koko, kulindeleke ukuba iboniswe ngaphambi kokuphela konyaka nazo zonke iinkcukacha zayo, ezibandakanya ixabiso kunye nokufumaneka kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-OnePlus 6T ibonakala kwiifoto zokwenyani kwaye uyilo lwayo luyabonakala
Sele ichukumise u-c. Ezi modeli zimbini aziboniswanga ngaxeshanye ukuze zikhethe eyokuthenga. Emva kokutyala imali phezulu kuluhlu emva kweenyanga ezimbalwa bayiphosa emhlabeni. Bayeke bobabini bakhuphe ngaxeshanye kwaye abathengi baya kuthatha isigqibo sokuba bathenge eyiphi.